Fetim-bokatra 2020, fetim-bokatra miavaka tokoa noho ny hamehana ara-pahasalamana – FJKM Ambavahadimitafo Fetim-bokatra 2020, fetim-bokatra miavaka tokoa noho ny hamehana ara-pahasalamana |
Fetim-bokatra 2020, fetim-bokatra miavaka tokoa noho ny hamehana ara-pahasalamana
A la une.Antso sy filazana.Randrianarisoa Alain.Vaovaom-piangonana
Publié le 27 juin 2020 à 01:06
Alakamisy, 25 jona 2020
« Ary toy izany koa hianareo ; raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. » (I Kor 14 : 12)
Ho antsika mpianakavy amin’ny finoana eto Ambavahadimitafo sy ireo Zanaka Am-pielezana rehetra.
Antony : Fetim-bokatra 2020
Ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa. Araka ny efa fantantsika dia amin’ny Alahady 05 Jolay 2020 izao ny fetim-bokatra eto amintsika Ambavahadimitafo :
• Fotoana hitondrana am-bavaka ireo asan’Andriamanitra sahanin’ny Fiangonana. Fotoana ihany koa hiaonantsika nobeazina sy nandalo teto amin’ny Fiangonana, fa fotoana ihany koa hamoriana vola hoenti-manatanteraka ireo asan’ny Tompo (anatiny sy ivelany) koa ny vinantsika miaraka amin’ny Tompo amin’ity taona ity dia 16Millions Ariary.
Koa manentana antsika rehetra, fa indrindra ianareo Zanaka Ampielezana mba ho tonga hiara mivavaka sy hifanome tànana amin’ny Tompo.
• Fanaontsika ny manao « Tonona » ho fanomanana izany Fetim-bokatra izany izay azontsika arotsaka amin’ny fomba mahazatra sy aty am-piangonana.
Misaotra antsika rehetra sahady amin’ny fitondrana am-bavaka izany asan’ny Tompo izany ary manantena ny fahatongavantsika rehetra.
• Misaotra ny Tompo isika fa amin’ny anjarantsika Fiangonana amin’ny Trano Fidiovana 39Millions Ariary dia 10 Millions Ar sisa no miandry antsika (efa eo an-tànana ankehitriny ny 3Millions Ariary), ny ezaka sisa araka izany dia 7Millions Ariary, koa manentana antsika samy handray anjara : ny Tompo Jesoa anie hamaly fitia antsika.
Mirary ny fiadanan’Andriamanitra ho antsika rehetra ry havako.